Hagaha SEO Meelaha laga sooco: Waa maxay noocyada xiriirinta?
Ganacsiyo badan ayaa ka faa'iideysanaya isticmaalka Optimization Search Engine (SEO) ee boggaga ganacsiga. Nidaamka raadinta raadinta waa qorshe digital marketing kaas oo ku daraya qaar ka mid ah hababka waaweyn ee mulkiilayaasha websaydhka loo shaqeeyo samaynta bogga ama calaamada helaya aragti ballaaran oo online ah. Shirkadaha waaweyn waxay ka faa'iidaystaan ​​isticmaalka SEO, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Tusaale ahaan, dadku waxay isticmaali karaan SEO-yada boggooda internetka e-macaamiladooda waxayna qaadan karaan macaamiisha badan internetka.
Marka la isticmaalayo SEO, dadka ayaa laga yaabaa inay ka yaabaan isticmaalka erayada gaarka ah iyo ujeedooyinka SEO. Tusaale ahaan, dad badan oo SEO ah ayaa laga yaabaa inay ku cusub yihiin warshadaha. Qaar ka mid ah ereyada sida hyperlink, backlink, raacsan ama xiriir aan toos ahayn iyo sidoo kale isku xirka saxda ah ama khaldan. Waa lagama maarmaan in la dhiso bogga internetka kaas oo leh qaar ka mid ah istaraatijiyadaha ugu fiican SEO si loo abuuro bogga internetka.
Ross Barber, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu qeexayaa qaar ka mid ah xiriirada ku jira hababka SEO:
Hyperlinks ayaa tilmaamaya qoraallada iyo xuduudaha kale ee lagu soo bandhigo kuwaas oo ka kooban dhinacyo ay ku jiraan URL-yada kale. Waxaa muhiim ah in la dhigo hyperlinks sida marka aad sameysid martida martida ee SEO. Xaaladaha kale, dadku waxay isticmaali karaan hyperlinks xaalad taas oo ka dhigaysa inay ku xirantahay xiriirka gudaha ee domainka..Hyperlinks waxay kaa caawin kartaa hagaajintaada UX iyo sidoo kale inaad ka qeyb qaadatid qodobada kala sareynta.
Marka aad samaynayso SEO, dib u qabasho waa dhinac caadi ah ee kordhinta maamulka domain. Waxay ka dhigeysaa boggagaaga iyo domainka ku habboon naftaada, samaynta mashiinnada raadinta meel sare oo ku yaal SERPs. Xidhiidhka guduhu waa isku xirnaanta boggagaaga, laakiin dhammaantood waxay ka soo jeeda isla goobta oo ah websiteka laftiisa. Nidaamkan SEO wuxuu ka dhigayaa websiteka in uu helo gaadiidka wanaagsan iyo sidoo kale kordhinta awoodda astaanta ee goobtaada.
Kuwani waa xiriirro ka yimaada bog kale oo ka yimaada domiyo kale. Backlinks waxay la mid yihiin xiriirada dibedda oo kaliya in ay leeyihiin hab ka soo horjeeda dhacdada. Tusaale ahaan, waxaa dhici karta in dib u dhaco dib-u-dhac ku yimaada websaydh kale. Kuwani waa kuwa loo tiriyo sida dhabta dhabta ah. Waxa kale oo ay kordhiyaan maamulkaaga domain, tixgelinta ku habboon, iyo saldhiga macaamilka.
La soco iyo xiriiro aan la socon
Mararka qaar, waad isku dari kartaa isku xirka oo aad ku wareejin kartaa awooddaada xiriiriyahaaga. Xaaladaha kale, xiriiriyaha cabitaanka ayaa joogi kara ama maahan. Xaaladahan, dadku waxay isticmaalaan xiriiro aan la socon si loo hubiyo in hannaankani uu ku guuleysto. Raadinta xiriirka waa mid muhiim u ah sameynta boggaga internetka oo dhan oo u muuqda kuwa ay u arkaan.
SEO waa mid ka mid ah istaraatiijiyada suuq-geynta internetka ugu fiican. SEO wuxuu ka caawiyaa ganacsiyo badan ayaa ku leh saldhig weyn oo macaamiisha ah meelo badan oo dunida ka mid ah. Waa suurtagal in la tago qalabyada otomaatiga ee kala duwan ee SEO-ga oo ku guuleysta qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loo xakameeyo habka websiteka u dhaqmo. Dadka qaarkiis ayaa laga yaaba in ay qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha SEO ee macneheedu yahay. Qaar ka mid ah farsamooyinka SEO ee ugu fiican ayaa laga heli karaa goobta internetka iyo sidoo kale samaynta qaar ka mid ah isbedellada lagama maarmaanka u ah xirfadahooda suuq-geynta internetka Source .